Chelsea oo soo bandhigtay maaliyadda ay xiran doonto marka ay gurigeeda ku ciyaarayso fasal ciyaareedka cusub ee 2020/21.… + SAWIRRO - Hargeele - Wararka Somali State
(London) 01 Luuliyo 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ee ka dheesha horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ayaa soo bandhigtay maaliyadda ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub.
Kooxda reer London waxa ay shaacisay maaliyadda ay ku ciyaari doonto marka ay mininkeeda joogto xilli ciyaareedka cusub ee 2020/21.
Maaliyaddan ayaa dhammaanteed wada Buluug ah ayaa kuleetiga iyo afka hore ee gacmaha waxa ay ku leedahay diillin buluug madow xigeen ah.
Labiskan cusub oo ay kooxda Chelsea ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub waxaa farsameysay shirkadda qalabka isboortiga ee Nike, waxaana xabadka kaga dheggan 3 (saddex) oo ah sumadda shirkadda ay heshiiska la gashay oo ay xayeysiin doonto ee Three UK iyo astaanta kooxda.
Kooxda Roma oo AC Milan ku garaacday Stadio Olimpico… +SAWIRRO